२१ महिनाने बालक उप’चारको क्रममा नि’धन ! – Yuwa Aawaj
२१ महिनाने बालक उप’चारको क्रममा नि’धन !
जेठ १४, २०७८ शुक्रबार 664
काठमाडौं : आफ्नै घरको बारदलिबाट ल डे र ग म्भि र घा’इते भएका बसन्त राईका २१ महिनाका छोरा अनमोल राईको उपचा’रको क्रममा नि’धन भएको छ । बुधबार बिहान फिदिम नगरपालिका १ स्थित आफ्नै घरको बारदलिबाट
ल डे र अनमोल गम्भि’र घा’इते भएका थिए । पाँचथर अस्पतालमा अनमोलको उ’पचार सम्भव नभएपछि थप उपचा’रका लागि झापाको बी एण्ड सी अस्ताल लागिएको थियो । टा उ कोमा चो ट ला गे र ग म्भि र भएका अनमोलको उपचारकै क्रममा निध’न भएको परिवारले जनाएको छ ।
यो पनि, को’रोना सङ्क्र’मितलाई निःशुल्क पो’षणयुक्त खाना को’रोना सङ्क्र’मिणका बिरामीले पोष’णयुक्त खानेकुरा नपाउँदा ज्यान जाने गरेको खबर आइरहेका बेला जिल्लामा कार्यरत सम विकास केन्द्र (इडिसी) नामक एक गैरसरकारी संस्थाले यहाँका कोरो’ना सङ्क्र’मितलाई पो’षणयुक्त खानाको व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त संस्थाले जिल्ला अस्प\_तालको आइसो’लेशनकक्षमा भर्ना भएका को’रोना सङ्क्र’मितलाई २१ दिनसम्म पो’षणयुक्त खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
संस्थाले यही जेठ ११ गतेदेखि कोरो’ना सङ्क्र’मितलाई पो’षणयुक्त खाना खुवाउन थालेको कार्यक्रम संयोजक केशव परियारले बताउनुभयो ।विदेशी दातृ निकाय एक्शन एड नेपालसँगको सहकार्यमा उक्त संस्थाले आइ’सोलेशनमा भर्ना
भएका सङ्क्र’मित तथा उनीहरुका कुरुवाका लागि खानाको व्यवस्था मिलाएको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालभित्र रहेको क्यान्टिन र सम विकास केन्द्रबीच स’म्झौता भएअनुसार क्या’न्टिन सञ्चालकले प्रत्येक दिन रु ५० को बिहानको नास्ता, फलफूल तथा रु १३० को बिहानको खाना दिने गरेका छन् ।
यसैगरी रु ५० को दिउँसोको नास्ता, फलफूल तथा साँझको रु १३० को खाना गरी बिरामी र प्रत्येक बिरामीका एक कुरुवासमेतलाई उक्त खानेकुरा प्रदान गरिँदै आएको छ । संस्थाले यही जेठ ३१ गतेसम्म आइसो’लेशनमा जे–जति सङ्ख्यामा बिरामी आए पनि ती बिरामी र उनीहरु प्रत्येकका एक कुरुवाको खाना तथा नास्ताको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
Prevबागलुङकी ९ बर्षीय रिहाना पुन उप’चारको लागि पैसाको अभाबले मृ त्यु सङ्ग लड्दै ।
Nextखाने तेलको मूल्य बढाउने दुई उद्योगलाई तीन-तीन लाख जरि’वाना ।
सर्वसाधारणको लागि फेरि अर्को इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने ।
अमेरिका द्वारा नेपाललाई १५ लाख खोप सहयोग – खोपको प्राथमिकतामा को को ?
रबि लामिछाने पुगे भागरथिको घरमा ,चुप लागेर ब’स्दैनौ भन्दै सडकमा उ’त्रिए !न्याय दि’लाएरै छोड्छौ भन्दै यसरी ग’र्जिए(हेर्नुहोस भिडियो सहित)